အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဒုဥက္ကဌ သူရဦးတင်ဦး မှ ဥရောပကော်မရှင်ထံ သို့ ပေးစာ
Friday, September 24, 2010 5:02 PM | Posted by Unknown
NLD U Tin Oo Letter to European Commission Official
ပြည်သူ့အာဏာဂျာနယ် (အမှတ်စဉ် ၃၂၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်)
4:26 PM | Posted by Unknown
စစ်အစိုးရအပေါ် စုံစမ်းရေးကော်မရှင် ဖွဲ့ဖို့ ပြင်သစ်ထောက်ခံ
3:14 PM | Posted by Unknown
Sources: RFA Burmese
မြန်မာစစ်အစိုးရ အာဏာပိုင်တွေက ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကို ကုလသမဂ္ဂ ကော်မရှင်ဖွဲ့ စုံစမ်းဖို့ အဆိုကို ပြင်သစ်အစိုးရက ထောက်ခံလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့မှာ ကျင်းပနေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ ဖွင့်ပွဲ အတွင်း ပြင်သစ်အစိုးရက လူသိထင်ရှား ကြေညာခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံထဲက နိုင်ငံတကာပြစ်မှု ကျုးလွန်နေတယ်ဆိုတဲ့ ပြောဆိုချက်တွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ ကုလသမဂ္ဂ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ဖို့ ထောက်ခံကြောင်း ဖော်ပြခဲ့တယ်လို့ စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက် ဒီကနေ့ ထုတ်ပြန်တဲ့ ပြင်သစ်အခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်း ၄ ခုရဲ့ ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ရွှေဝါရောင် သံဃာနှင့် လူထု လှုပ်ရှားမှုတွင် စစ်အစိုးရ၏ အကြမ်းပစ်ခတ် နှိမ်နင်းမှုကြောင့် သေဆုံး ဒဏ်ရာရသူများ၏ ဓာတ်ပုံကို ကိုင်ဆောင်ရင်း ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ ပဲရစ်မြို့လယ်တွင် ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်က ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြနေသူတဦး ဖြစ်ပါသည်။ (Photo: AFP)
အလားတူပဲ ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့က ကျင်းပတဲ့ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျီနီဗာမြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီင်္ ညီလာခံမှာလည်း ပြင်သစ်သံအမတ်ကြီးက မြန်မာနိုင်ငံက လူ့အခွင့်အရေး စနစ်တကျ ချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေကြောင်း၊ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် အဆိုပြုထားတဲ့ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ဖို့ ကိစ္စကို ပြင်သစ်က ထောက်ခံကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပြင်သစ်က ထောက်ခံတာဟာ မြန်မာ့အရေးအတွက် အရေးကြီးတဲ့ ခြေလှမ်းတခုပါလို့ အမေရိကန်အခြေစိုက် မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့က ဦးအောင်ဒင်က ပြောပါတယ်။
“ဟုတ်ကဲ့၊ ဒါကတော့ အင်မတန် အရေးကြီးတဲ့ တိုးတက်မှု တရပ်ပါပဲ။ ကုလသမဂ္ဂ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းရေး ကိစ္စကို ထောက်ခံတာ အခု ဒီ နောက်ဆုံး ထောက်ခံတဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပါလို့ရှိရင် ၁၀ နိုင်ငံ ရှိသွားပြီပေါ့။ ဆိုတော့ ဒီ နိုင်ငံတွေရဲ့ ထောက်ခံမှုက အင်မတန် အရေးကြီးပါတယ်။ နောက် ဒီနိုင်ငံတွေကလည်း အားကောင်းတဲ့ နိုင်ငံတွေ ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ ဒီ ၁၀ နိုင်ငံက နေပြီးတော့ ဒီထက် ပိုများတဲ့ နိုင်ငံတွေ ပိုပြီး ထောက်ခံလာလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့က ယုံကြည်တယ်။ အဲဒီလို ထောက်ခံတဲ့ နိုင်ငံတွေ များလာတာနဲ့အမျှ အခု ကုလသမဂ္ဂကနေပြီးတော့ ဒီ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဒီ လူသားမျိုးနွယ်စု တရပ်လုံးကို ပစ်မှတ်ထားပြီး ကျူးလွန်နေတဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေ၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အတွက် ကော်မရှင် ဖွဲ့ရေးကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီ ဆုံးဖြတ်ချက်တရပ် ချနိုင်ဖို့ အခြေအနေက ပိုပြီးတော့ နီးကပ်လာတယ်လို့တော့ ကျွန်တော်တော့ မြင်တယ်ဗျ။”
ပြင်သစ်အစိုးရက ဒီလိုထောက်ခံတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြင်သစ်အခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေ ဖြစ်တဲ့ FIDH, Info-Birmanie, ပြင်သစ် လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့ချုပ်နဲ့ လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ (Human Rights Watch) အဖွဲ့ခွဲတို့က ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်အထိ မြန်မာစစ်အစိုးရအပေါ် စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ စစ်ဆေးဖို့ အဆိုကို တရားဝင် ထောက်ခံတဲ့ နိုင်ငံတွေကတော့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဗြိတိန်၊ ကနေဒါ၊ သြစတြေးလျ၊ ချက်သမတနိုင်ငံ၊ စလိုဗက်ကီးယား၊ ပြင်သစ်၊ နယ်သာလန်၊ ဟန်ဂေရီနဲ့ နယူးဇီလန်နိုင်ငံ တွေဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်က မြန်မာစစ်အစိုးရကို ဒေါ်လာ သန်း ၄,၂၀၀ အတိုးမဲ့ ထုတ်ချေး
2:36 PM | Posted by Unknown
မြန်မာစစ်အစိုးရကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၄,၂၀၀ အတိုးမဲ့ ထုတ်ချေးဖို့ တရုတ်အစိုးရက သဘောတူလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ မကြာခင်က တရုတ်ပြည်ကို သွားရောက်ခဲ့တဲ့ ခရီးစဉ်အတွင်း ဒီသဘောတူညီချက် ရရှိခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။
တရုတ်သမတ ဟူဂျင်တောင် (အလယ်-ဝဲ)နှင့် မြန်မာစစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ (အလယ်-ယာ) တို့ကို စက်တင်ဘာ ၈ ရက်နေ့က တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဘီဂျင်းမြို့တော် ပြည်သူ့ခန်းမဆောင်တွင် ကျင်းပသော ကြိုဆိုပွဲ အခမ်းအနားတွင် တွေ့ရပုံ ဖြစ်ပါသည်။ (Photo: AFP)
အခုလို မြန်မာစစ်အစိုးရအနေနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံက ချေးငွေ လက်ခံယူလိုက်တဲ့အတွက် တရုတ်အစိုးရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် သြဇာလွှမ်းမိုးမှု၊ တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ စီးပွားချုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်မှုတွေကို လမ်းဖွင့်ပေးသလို ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ရန်ကုန်မြို့ အခြေစိုက် စီးပွားရေး ပညာရှင် တဦးက ပြောပါတယ်။
ဒါ့ပြင် ဒီချေးငွေ ရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကို သာမန် မြန်မာပြည်သူတွေ ခံစားရမှာ မဟုတ်သလို၊ ဒီငွေတွေကို ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုသုံးစွဲတယ် ဒါမှမဟုတ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက စစ်တပ်တိုးချဲ့မြှင့်တင်ရေးအတွက် ဘယ်လောက် သုံးစွဲတယ် ဆိုတာတွေကို ထုတ်ပြန်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ အခြေစိုက် မြန်မာ့အရေး လေ့လာသုံးသပ်သူ ဒေါက်တာ လှကျော်ဇော ကတော့ တရုတ်အစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံကို အခုပေးအပ်တဲ့ ငွေကြေးအကူအညီဟာ တခြား ဖွံ့ဖြိုးဆဲ အာဖရိကနိုင်ငံတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် အင်မတန် နည်းနေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“တရုတ်က ဒီလို ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံ တော်တော်များများကို သူ ငွေတွေ ထုတ်ချေးတယ်။ သူ့မှာ ငွေတွေ အများကြီး ရှိတာကိုး။ အရန်ငွေတွေက three trillion နီးပါးလောက် ရှိတယ်။ သန်းပေါင်း သုံးသန်းနီးပါးလောက် ရှိတယ်၊ ဒေါ်လာ ဒေါ်လာ။ အဲဒီတော့ သူက အဲဒီဟာတွေကို တော်တော်များများကို ထုတ်ချေးတယ်။ ထုတ်ချေးတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က အဲဒီ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေ သူက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရေးအတွက် သူက စဉ်းစားတာ။ အဲဒီနိုင်ငံတွေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှ သူ့နိုင်ငံက ပစ္စည်းပစ္စယတွေ ဝယ်နိုင်မယ်၊ ရောင်းနိုင်မယ်။ ဒီရေရှည်အမြင်နဲ့ သူထုတ်ချေးတာပါ။”
“ဗမာပြည်ကို ပေးတယ်ဆိုတာ အင်မတန်ကို နည်းပါသေးတယ်။ သူ အာဖရိကနိုင်ငံတွေကို အများကြီး ပေးထားတာပါ။ အခြေခံအဆောက်အအုံတွေ ဆောက်တာ၊ လမ်းတွေ ဆောက်တာ၊ တံတားတွေ ဆောက်တာ၊ အများကြီး လုပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အနောက်နိုင်ငံက အာဖရိကတိုက်မှာ တရုတ်က ကိုလိုနီလက်သစ်ဖြစ်တယ် ဘာတယ်လို့တောင် စွပ်စွဲတာတွေ ဘာတွေ ခံရတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ချေးတယ်ဆိုရင်တော့ သူတို့မျက်နှာ ကြည့်ရတာတော့ ပါမှာပေါ့ဗျာ။”
စစ်ဖက်သတင်း ရပ်ကွက်တခုရဲ့ အပြော အရတော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေဟာ အခု နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်နေ့ ကျင်းပမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ပေါ်ပေါက်လာမဲ့ လွှတ်တော်သစ်ကိုလည်း စစ်ရေးအသုံး စရိတ်တွေ တင်ပြမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ကာတွန်း “ဖြစ်လေ့ ဖြစ်ထ ရှိတာပဲ” ဟန်လေး Tuesday, September 14, 2010
2:26 PM | Posted by Unknown
Don't worry. They're unimportant by Harn Lay (Irrawaddy)
“မကြာမီလာမည် ... မျှော်” (ကာတွန်း ဟန်လေး - ဧရာဝတီဝက်ဘ်ဆိုက်)
2:15 PM | Posted by Unknown
The Role of Political Prisoners in the National Reconciliation Process Burmese
Thursday, September 23, 2010 4:18 AM | Posted by Unknown
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဒုဥက္ကဌ သူရဦးတင်ဦး ...
ပြည်သူ့အာဏာဂျာနယ် (အမှတ်စဉ် ၃၂၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၀ ခု...
စစ်အစိုးရအပေါ် စုံစမ်းရေးကော်မရှင် ဖွဲ့ဖို့ ပြင်သစ်...
တရုတ်က မြန်မာစစ်အစိုးရကို ဒေါ်လာ သန်း ၄,၂၀၀ အတိုးမဲ...
ကာတွန်း “ဖြစ်လေ့ ဖြစ်ထ ရှိတာပဲ” ဟန်လေး Tuesday, Se...
“မကြာမီလာမည် ... မျှော်” (ကာတွန်း ဟန်လေး - ဧရာဝတီဝ...
The Role of Political Prisoners in the National Re...